नेपालमा कोरोना संक्रमित घट्नुका यी हुन् चार खास कारण – Health Post Nepal
नेपालमा कोरोना संक्रमित घट्नुका यी हुन् चार खास कारण
२०७८ असोज ५ गते १९:१०
पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या तथा मृत्युदर घट्दै गएको छ।
केही सातायता कोरोनाको संक्रमणदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उच्चबिन्दुमा पुग्दा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाखभन्दा बढी पुगेको थियो। दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमण हुने दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो।
त्यसैगरी, मृत्युदर पनि घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। दोस्रो लहरमा सबैभन्दा धेरै २०७८ जेठ ५ मा २४६ जनाको मृत्यु भएको थियो।
मंगलबार सो संख्या घट्दै ५ मा ओर्लिएको छ।
किन घट्दैछ कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर?
शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन हाल चार कारणले नेपालमा संक्रमण घट्दै गएको अनुमान गर्छन्।
पहिलो–खोपले निरन्तता पाउँदै जानु
तेस्रो–भेरियन्ट परिर्वतन नहुनु
चौथो–संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेपछि बिस्तारै झर्ने प्रक्रिया
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समयअघि प्रकाशित गरेको एक सर्वेक्षणमा ६८ प्रतिशत मानिसमा एन्टीबडी बनेको देखिएको छ। अहिले नेपालमा डेल्टा भेरियन्टमात्रै फैलिएको र अन्य भेरियन्ट पुष्टि हुन सकेको छैन।
‘खोपको पहुँच बढ्दै गएको छ। जोखिममा परेका समूहले खोप पाइसकेका छन्। जसका कारण पनि संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको छ,’ डा. पुन भन्छन्।
त्यसैगरी, संक्रमण कम हुनुमा एकै भेरियन्टले निरन्रता पाउनु हो।
‘नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट नै घुमिरहेको छ। एकै भेरियन्टले पटक–पटक संक्रमित बनाउँदैन। अहिले पनि पहिलो पटक संक्रमित भएको व्यक्ति भेटिइरहेका छन्,’ डा. पुन भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्यको मापदण्डले पनि धेरे हदसम्म संक्रमण न्युनीकरण गरेको छ।’
चिकित्सकका अनुसार संक्रमणबाट निको भएका र खोप लगाएका मानिसमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने क्षमता ( एन्टिबडी) हुन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक करोड १८ लाखभन्दा बढी खोप लगाइसकिएको छ।
मंगलबारसम्म ५६ लाख २८ हजार ७९२ ले पूर्ण मात्रामा कोभिड खोप लगाइसकेका छन् भने पहिलो मात्रा ६२ लाखभन्दा बढीले पाइसकेका छन्।
डेल्टा भेरियन्ट सबै ठाउँमा फैलिएको र अधिंकास मानिसमा एन्टिबडी विकास भएकाले पनि संक्रमण स्थिर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्।
अन्य मूलकबाट नयाँ भेरियन्ट प्रवेश गर्न नदिनका लागि निगरानीमा थप ध्यान दिनुपर्ने डा. पौडेलले बताए।
‘खोपको पहुँच, एन्टिबडी विकास तथा जनचेतनाको कारणले पनि मृत्यु तथा संक्रमण घट्दै गएको देखिन्छ,’ डा. पौडेल थप्छन्, ‘दोस्रो लहरमा दैनिक मृत्यु २ सयभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा आजभोलि १० भन्दा तल झरेको छ।’
त्यसैगरी, मन्त्रालयले तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत–साधन बढाउने तथा बालबालिकाको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम भइरहेको जनाएको छ।
तेस्रो लहरको सम्भावना कति ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ असोजदेखि तेस्रो लहरको सम्भावना रहेको अनुमान गरेको छ । विज्ञहरू पनि असोज–कात्तिकमा अर्को लहर आउने सम्भावनालाई नकार्दैनन्।
दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वमा मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र भिडभाड बढ्ने भएकाले कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको डा. पुन बताउँछन्।
‘दसैंमा मानिसहरू आउजाउ बढी हुन्छ। खोप लगाएका मानिस पुन संक्रमित हुन सक्छन्। जसमा भाइरल लोेड बढी हुन्छ,’ डा. पुन भन्छन्, ‘अहिले लकडाउन पनि छैन। शहरबाट गएका मानिसले पुन संक्रमण फैलाउने देखिन्छ।’
‘अहिले घट्यो भनेर मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने दशैं तिहारको भीडभाडले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना हुने डा. पौडेलको भनाइ छ।
५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला
जिल्ला अनुसार कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या हेर्ने हो भने ५ सय भन्दामाथि उपचारार्थ संक्रमित भएका जिल्लाहरु मंगलबारसम्म ९ वटा रहेका छन्।
एक महिनाअगाडि यसको संख्या २० भन्दा माथि उक्लिएको थियो। यो संख्या पनि घटेको पाइएको हो। ती ९ जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही रहेका छन्।
त्यसैगरी, २ सयभन्दा माथि संक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरू धनुषा, बारा, सप्तरी, सिरहा, काभे्रपल्चोक, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नवलपरासी पूर्व, बाग्लुङ, गोरखा, स्याङजा, तनुँह, पर्वत , दाङ,गुल्मी, बाँके, सुर्खेत, जुम्ला र कैलाली रहेका छन्।
तेस्रो चरणको सरकारी तयारी के छ?
मन्त्रालयले बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर थप गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। २ हजार ६ सय आईसीयू बेड रहेकोमा हाल ४ सय थप गरेर ३ हजार पुर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमा ६ सय ३० वटा आईसीयू बेड थप गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय छ।
हाल भेन्टिलेटरको संख्या ९ सय छ। १ सय ८० वटा थप गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय छ । एचडीयू बेडको संख्या सरकारीमा २ हजार ७५ र निजीमा ७ सय ७८ थप गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बच्चाहरूका लागि १ सय ८० भेन्टिलेटरसहितको २ सय ७५ आईसीयू बेड थप्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, ६ हजार अक्सिजन सिलिण्डर थप गरिएको छ । ५ हजार ५ सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको व्यवस्था भइसकेको र ३ हजार ५ सय थप आउने क्रममा छ । २७ वटा लिक्विड अक्सिजन ट्यांक थप गर्ने योजनाअन्तर्गत दुई वटाको कार्य सम्पन्न भएको छ। चारवटाको प्रक्रिया सुरु भएको र १० वटाको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७७ जिल्लामै अक्सिजन प्लान्ट थप गर्न लागिएको छ। १९ वटा ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट थप गर्न स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ।
डा. शेर बहादुर पुन
एघारौं तहमा १२० भन्दा बढी चिकित्सक, तर संघको अस्पतालमा ८ औं तहलाई जिम्मेवारी!
वीर अस्पतालको ल्याब रिर्पोट घरमै बसेर हेर्न सकिने, अन्यको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो
अमेरिकी फाइजर खोप नेपाल भित्रिँदै, सोमबार आइपुग्ने
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. दिपेन्द्ररमण सिंह
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा औँलामा छालाको समस्या, यी हुन् लक्षण